मेरा बा, धेरैका बा – Chitwan Post
मेरा बा, धेरैका बा
मृत्यु जीवनको शाश्वत् पक्ष हो तर ५७ वर्षको उमेरमा भएको स्वर्गारोहणलाई पक्कै पनि असामयिक मान्नुपर्छ । जीवराज अर्याल चितवन जिल्लामा परिचय दिइराख्नुपर्ने नाम होइन । चितवन जिल्लामा पत्रकारिता, शिक्षा र सिँचाइको क्षेत्रमा उहाँले पु¥याउनुभएको योगदानले नै उहाँको व्यक्तित्वको बयान गर्दछ । मेरा बा उनै जीवराज अर्याललाई गत फागुन १७ गते हामीले सदाका लागि गुमाऔँ । फागुन १५ गतेसम्म यसै दैनिकको व्यवस्थापनमा सक्रिय रहनुभएको उहाँलाई त्यसै रात भएको हृदयाघातले हामीबाट टाढा बनायो । उहाँको स्वर्गारोहण असामयिक अनि अप्रत्याशित थियो तर उहाँले कुनै कठिनाइविना नै धेरै सहज मृत्युवरण गर्नुभयो । बाको जीवन बोल्दा बोल्दै र हिँड्दा हिँड्दै गयो । उहाँको स्वर्गारोहणसँगै एउटा संघर्षमय जीवनको अन्त्य भयो । उहाँलाई चिन्ने धेरैलाई उहाँको संघर्षको कथा थाहा नहुन पनि सक्छ, त्यसैले यस आलेखमार्फत् उहाँको संघर्षपूर्र्ण व्यक्तित्वको चित्रण गर्दै आदरणीय बालाई उहाँको ४५औँ दिनको पुण्यतिथिमा हार्दिक श्रद्धासुमन टक्र्याउन चाहन्छु ।
मृदुभाषी र अत्यन्त मिलनसार बाले सायद नै जीवनमा कसैको चित्त दुखाउनुभयो । सबैसँग हाँसेर बोल्ने स्वभावका साथै आफ्नो सम्पर्कमा रहनेसँग आत्मीय सम्बन्ध बनाउने उहाँको बानी थियो । त्यो भन्दा पनि बढी पत्रकारिता, मुद्रण अनि अरु व्यवसायमा लागेका धेरैले उहाँलाई ‘बा’ नै भनेर सम्बोधन गर्थे । करिब दस वर्षअघिको कुरा हो म चितवन पोष्टको कार्यालयमा थिएँ । मेरा लागि एक अपरिचित अनुहार कार्यालयमा प्रवेश गर्नुभयो र सोध्नुभयो– जीवराज बा हुनुहुन्न ? आफ्नै बा भए पनि कार्यालयभित्र उहाँलाई सर भन्थेँ म, त्यसैले जवाफ दिएँ, ‘जीवराज सर त हुनुहुन्न ।’ मैले उहाँलाई सोधेँ, ‘अनि तपाईं ?’ उताबाट जवाफ आयो– ‘म उहाँको छोरो ।’ म आश्चर्यचकित भएँ अनि मनमनै सोचेँ, ‘मेरा बा भन्नेलाई मैले कसरी चिनिन ?’ बेलुका भेटपश्चात् बालाई मैले यस विषयमा सोधेँ, उहाँले सगौरव भन्नुभयो, ‘खोइ धेरैले बा भन्छन्, म पनि छोरो÷छोरी भनिदिन्छु, यसले सम्बन्ध गाढा बनाउँछ, तँ विस्तारै बुझ्छस् ।’
बा आफ्ना मतहतमा रहेका कर्मचारीहरुलाई कहिल्यै पनि कर्मचारीको व्यवहार गर्नुभएन । सधैँ आफ्नै परिवारको सदस्य झैँ व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुहुन्थ्यो– ‘चितवन पोष्ट एउटा परिवार हो, यहाँ कोही पनि सानो–ठूलो छैैन, सबैको भूमिका मह¤वपूर्ण छ ।’ यसका अलावा बाले आफ्नो संस्थाका कर्मचारीलाई तलब दिने सम्बन्धमा पनि सधैँ चुस्त हुनुहुन्थ्यो । यसै चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरिरहँदा यस संस्थासँग आवद्ध सबैलाई महिना सकिनुअगावै तलब वितरण गर्ने बाको बानी थियो । यसकै प्रभावले होला वर्षौंअघि चितवन पोष्टको वितरण छोड्नुभएका केही वितरकहरु उहाँको स्वर्गारोहणपश्चात् समवेदना व्यक्त गर्न हाम्रो निवास आउनुभएको थियो । यस दैनिकमा म आफैँ प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरुपमा विगत १५ वर्षदेखि जोडिएको छु । यस दौरानमा चितवन पोष्ट दैनिकले आर्थिकरुपमा धेरै कठिनका दिनहरु पार गरेको मैले आफैँले देखेको छु तर कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्न बा कहिल्यै चुक्नुभएन । धेरैपटक ऋण नै गरेर तलब वितरण गरेको इतिहास छ । यस विषयमा यस चितवन पोष्ट दैनिकका संस्थापक सम्पादक, मेरा ठूला बा स्व. धर्मराज अर्यालको भूमिका पनि उत्तिकै मह¤वपूर्ण छ । साथै, आफ्ना निकटमा भएका प्रायः सबैलाई व्यक्तिगत उतारचढावका बारेमा सोध्ने, सरसल्लाह दिने, ढाडस प्रदान गर्ने अनि सकेको मद्दत गर्ने उहाँको स्वभाव थियो । सायद पिताले झैँ माया गर्ने, ख्याल राख्ने अनि मद्दत गर्ने भएकाले होला मेरा बा स्व जीवराज अर्याल धेरैका बा बन्नुभएको थियो ।
बाले जीवनभर धनलाई भन्दा शिक्षालाई बढी मह¤व दिनुभयो । बाले आफूले शिक्षा आर्जन गर्दा गरेको संघर्ष सगौरव सुनाउनुहुन्थ्यो । गोठालो, घाँसदाउरा अनि खेतीपाती गरेर निकै संघर्षपूर्ण तरिकाले शिक्षा आर्जन गरेको दृष्टान्त सुनाउँदा उहाँको मुहारमा एकप्रकारको क्रान्ति झल्किएको हुन्थ्यो । १४ वर्षको उमेरमा १० कक्षा पास गरेपछि शिक्षण पेसा सुरू गर्नुभएका उहाँले शिक्षणसँगै आफ्नो अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिनुभयो । २०५० सालको आसपासमा हुनुपर्छ उहाँले इतिहासमा मास्टर्स डिग्री सक्नुभयो । यदि म गलत छैन भने तत्कालीन वीरेन्द्रनगर गाउँ विकास समितिबाट मास्टर्स डिग्री गर्नुहुने उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तत्कालीन कोराक र वीरेन्द्रनगर गाविसका विद्यालयहरुमा एकदसकभन्दा बढी समय अध्यापन गराउनुभयो । शिक्षण पेसा अंगाल्दा पनि उहाँ निकै स्नेही शिक्षक हुनुहुन्थ्यो भनेर शिक्षक साथीहरु र पूर्व विद्यार्थीहरुले भनेको धेरैपटक सुनेको छु । कुरा २०५५ सालतिरको हो, हङकङबाट बाको नाममा एउटा अप्रत्यासित पार्सल आयो । त्यो पार्सल उहाँको पूर्व विद्यार्थीले पठाउनुभएको रहेछ । एउटा टिसर्ट, पाइन्ट र जुत्तासहितको उक्त पार्सलको एउटा पत्रमा लेखिएको थियो– ‘हजुरले दिनुभएको शिक्षा र देखाउनुभएको ममता जीवनभर सम्झना रहने छ ।’ यो प्रसंगले पनि बाको व्यक्तित्व उजागर गर्दछ ।
आफूमात्र होइन, अरुलाई पनि पढ्नुपर्छ भन्ने बाको स्वभाव थियो । म आफैँलाई पनि बाले पैसा हुँदा निजी विद्यालय र नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुभयो । यो क्रममा मैले कक्षा १० सक्दासम्म करिब १० विद्यालय फेरेँ । बाको धनभन्दा विद्यातर्फको मोह मसँग जोडिएको एउटा प्रसंगले अझ प्रष्ट पार्दछ । कुरा २०७० सालको हो, बेलायतबाट मास्टर्स सकेपछि मेरो हातमा दुईवटा विकल्प थिए, काम गर्ने भिषामा डेनमार्क वा छात्रवृत्तिमा विद्यावारिधि गर्न अष्ट्रेलिया जाने । अब पैसा कमाउनतिर लागौँ वा अझै पढौँ भन्ने द्विविधामा थिएँ म । त्यसैले द्विविधा हटाउन घर सल्लाह गर्ने निर्णय गरेँ । बाले काम गर्न डेनमार्क जाने विकल्पलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसैले म विद्यावारिधि गर्न अष्ट्रेलिया गएँ र सफलतापूर्वक सकेँ पनि । मैले विद्यावारिधि सक्दा मभन्दा बढी बा खुसी हुनुभएको थियो । अझ रोचक प्रसंग, एसएलसी सकेर करिब एकदसक वैदेशिक रोजगारपछि नेपाल फर्किएको दाइ गोविन्दलाई २७ वर्षको उमेरमा कक्षा ११ मा भर्ना गरिदिनुभयो बाले । क्रमिकरुपमा दाइ गोविन्दले स्नातक पूरा गर्दा बामा खुसीको सीमा थिएन ।
बाले हामीसँग साँट्ने जीवनभरको एउटै असन्तुष्टि थियो । साल मलाई यकिन भएन तर देशमा पञ्चायती व्यवस्था भएको बेलाको प्रसंग हो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैँकमा आफ्नो नाम निकाल्नुभएको थियो । तर, पञ्चयती व्यवस्थाका हिमायती पञ्चेहरुले बा कम्युनिस्ट धारको हो भनेर पोल लगाउँदा हातमा परिसकेको नेपाल राष्ट्र बैँकको जागिरबाट उहाँले हात धुनुपरेको थियो । यो घटना बाले मलाई पटक–पटक सुनाउनुहुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैँकको जागिरे हुँदा हुने सम्भावित सेवासुविधा सम्झेर उहाँको मन जीवनभर पिरोलिएको थियो । यति हुँदा हुँदै पनि मैले राजनीति बुझ्न सक्ने भएपछि बाको जीवनमा मैले बुझ्न नसकेको पक्ष उहाँको राजनीतिक झुकाव हो । सायद बा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई छान्नुपर्छ भन्ने विचारको हुनुहुन्थ्यो ।
चितवन पोष्ट नै जीवन
चितवन पोष्ट आज मोफसलकै एउटा अग्रणी पत्रिकाको रुपमा स्थापित छ । यस पत्रिकालाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउन धेरै महानुभावहरुको मह¤वपूर्ण योगदान छ । कुनै पनि पत्रिकाको स्थापनाकालीन समय निकै नै जटिल रहन्छ । जसमा आर्थिक समस्या त रहन्छ नै, यसका अलावा पाठक, विज्ञापनदाता अनि शुभेच्छुकलाई पत्रिकाको गुणस्तर र दीर्घकालीनताको लागि विश्वास दिलाउन निकै कठिन रहन्छ । चितवन जिल्ला जहाँ धेरै पत्रपत्रिकाहरु उदाए र अस्थाए पनि । यस्तो अवस्थामा यस दैनिकलाई यस स्थानसम्म पु¥याउन बाको संघर्षलाई नमन गर्नैपर्छ । चितवन पोष्टको प्रबन्ध निर्देशक भएर पनि उहाँ आफैँ पत्रिका वितरण गर्न जानुहुन्थ्यो । पाठक अनि विज्ञापनदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर पत्रिकाको स्तरोन्नति गर्न सल्लाह–सुझाव लिने बानीले यस पत्रिका छिट्टै धेरैको मनमा बस्न सफल भयो । पत्रिका वितरण गर्दै गर्दा नारायणगढ र भरतपुरका धेरै व्यवसायी अनि अग्रजहरुसँग उहाँले निकट सम्बन्ध बनाउनुभयो । जसको प्रतिफल चितवन पोष्ट सबैको रोजाइको पत्रिका बन्न सफल भयो ।
पत्रिका दीर्घकालसम्म चल्न विज्ञापनदाताको मह¤वपूर्ण योगदान रहन्छ । यसलाई बाले राम्रोसँग बुझ्नुभएको थियो । चितवनको सम्बन्ध विस्तारपछि उहाँले काठमाडौँ केन्द्रित विज्ञापनदातासँग पहुँच बढाउनुभयो । काठमाडौँबाट आउने विभिन्न व्यावसायिक विज्ञापन चितवनमा छपाउनु पर्दा चितवन पोष्ट नै उत्तम विकल्प हो भनेर विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी र व्यवसायीमाझ छाप छोड्न उहाँ सफल हुनुभयो । त्यसैको फल होला आज काठमाडौँ केन्द्रित करिब ५० विज्ञापन एजेन्सी र ज्यावसायिक संस्थासँग चितवन पोष्ट दैनिकसँग नियमित कारोबार गर्दछन् ।
बास्तवमा बाले आफ्नो जीवन पूर्णरुपमा चितवन पोष्टमै समर्पण गर्नुभएको थियो । उहाँ हमेशा चितवन पोष्टको स्तरोन्नतिका निम्ति चिन्तित रहनुहुन्थ्यो । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा चितवनमा पहिलोपटक रंगीन दैनिकको सुरुवात गर्ने श्रेय पनि बालाई नै जान्छ । रंगीन छापाखाना किन्ने र पत्रिकालाई रंगीन बनाउने विषयमा हामीबीच सल्लाह हुँदा मलगायत दाइहरु प्रकाश अर्याल र निर्मल अर्यालले पूर्ण असहमति जनाएका थियौँ । तर, उहाँले मेरो जीवनको उद्देश्य नै चितवन पोष्ट रंगीन प्रकाशित गर्ने हो भनेपछि हामीलाई मान्न करै लाग्यो । पछिल्लो दसक बालाई चितवन पोष्ट दैनिकबाहेक अन्य विषय गौण बनेको थियो । उहाँको असीम लगाव र परिश्रमले नै चितवन पोष्ट दैनिकको जग मजबुत बनेको हो ।
अन्त्यमा, बा ! तपाईंले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको चितवन पोष्ट दैनिक आगामी दिनहरुमा अझ मजबुत भएर जाने छ । श्रद्धेय ठूलो बुबा स्व धर्मराज अर्याल र तपाईंको सपना, तपस्या अनि परिश्रमले बुनेको यस दैनिक अझ उचाइमा जाने विश्वास दिलाउँछु ।